SMT Upakisho - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Ngamava kweminyaka engama-20 kweli candelo, singakwazi ukubonelela izisombululo omnye-stop kubathengi kuquka PCB awokuvelisa, amacandelo zokuthenga kunye neenkonzo Assembly PCB. Ngenxa imithetho yokuvelisa engqongqo kunye nemimiselo, ukwandisa ulwazi zeteknoloji nothakazelelo lokuzabalazela zobugcisa zakutsha nje, siye wayiqokelela izakhono ezininzi ukujongana oluneentlobo ezahlukeneyo iiphakheji yecandelo ezifana BGA, PBGA, chip Flip, CSP kunye WLCSP.
BGA, olufutshane ukuze uluhlu ibhola grid, luhlobo lwe-SMT (angaphezulu Mount Technology) package ukuba liya kusetyenziswa kwiisekethe ehlangeneyo (ICS). BGA kuluncedo ekuphuculeni solder uyoma ngokudibeneyo.
BGA liveza iingenelo zilandelayo:
• Isicelo olufanelekileyo indawo PCB
BGA iindawo iphakheji ngendibaniso ngaphantsi SMD (komhlaba iNtaba Icebo) iphakheji kunokuba ngeenxa ukuze isithuba kube kakhulu usindiswe.
• Ukuphucula ngokwemigaqo yokusebenza thermal kunye zombane
Ekubeni BGA iphakheji inceda ukwehlisa inductance iinqwelo-moya amandla kunye nomhlaba kunye ukuvimba imigca uphawu elawulwa, ubushushu inga siwa kude pad, yingenelo ukufudumeza ukusasaza.
• Ukwandisa of nezivuno lokuvelisa
Ngenxa inkqubela ye solder ukuthembeka, BGA uyakwazi ukugcina isithuba elikhulu kakhulu phakathi unxulumano ezikumgangatho ophezulu ngelotha.
• Ukuncitshiswa ubukhulu Package
Thina zibanga kokuphatha entle amacandelo phula indibano ukuya ngoku kuyisombulula loongxaki BGAs phula ogama ubuncinane kunokuba mncane 0.35mm.
Xa ubeka impahla epheleleyo BGA jika-iqhosha PCB ibandla umyalelo malunga, iinjineli zethu, kuqala kwiinto zonke, khangela iifayile zakho PCB kunye BGA Itheyibhile yeengcombolo ezivelileyo ukuze ukushwankathela inkangeleko oshushu apho iziqalelo kufuneka ithathelwe ingqalelo ezifana ubukhulu BGA , izinto ibhola njl Phambi kweli nyathelo, siya kuyitshekisha uyilo lwakho PCB for BGA nokubonelela itshekhi SIMAHLA DFM ukuba bazazi izinto eziyimfuneko ukuze ibandla PCB kuquka izinto zeendawana, umphezulu ugqatso, ukucoca soldermask, njl
Ngenxa iimpawu package BGA, ngokwawo Optical Ukuhlolwa (AOI) uyasilela ukuhlangabezana neemfuno lokuhlolwa. Siyathembisa ukuhlolwa BGA ngu ngokwawo X-ray Ukuhlolwa (-ziteksi) izixhobo ekwaziyo yokulindela iziphene ngelotha kumabakala okuqala phambi umthamo iimveliso.
PBGA, short for yeplastiki uluhlu ibhola gridi, yenye iifom sopakisho uthandwayo ukuba eliphakathi ukuya-high level I / izixhobo O. Ngokuxhomekeke zeendawana laminate equlethe layers zobhedu extra ngaphakathi, PBGA kuluncedo ukusasaza ubushushu kwaye kube ubukhulu umzimba enkulu kunye nenani neebhola ukuze ahlangane uluhlu olubanzi iimfuno.
PBGA liveza iingenelo zilandelayo:
• Ukucela inductance eliphantsi
• Ukwenza ubuso entabeni lula
• Iindleko kakhulu eliphantsi
• Kukugcina ukuthembeka eliphezulu
• Ukunciphisa imiba coplanar
• Ukufumana kakhulu-inqanaba eliphezulu yokusebenza thermal kunye zombane
Njengoko indlela uqhagamshelwano lombane, chip flip idibanisa kufa nomqulu zeendawana ngokuthi ijonge ngqo phantsi IC ukuze kube iqhotyoshelwe zeendawana, ibhodi wesekethe okanye yenethiwekhi. Kokufaneleka chip flip ziquka:
• Ukunciphisa inductance uphawu namandla inductanc emhlabeni /
• Ukwehlisa inani izikhonkwane impahla kunye nesayizi babulawa
• Ukwandisa mninzi uphawu
Ukuza kuthi ga ngoku, CSP na uhlobo entsha package, amafutshane package isikali chip. Njengoko inkcazo igama layo ibonisa, CSP libhekisela iphakheji ogama ubukhulu iyafana naleyo chip ne iziphene ngokuphathelele chips ezingenanto basuswe. CSP inikeza isisombululo sopakisho ukuba luthe lula, nakho ngokukhawuleza. Kwaye ke mpawu zilandelayo ze CSP usiza kukhokelela ukwanda nezivuno zendibano kunye neendleko iimveliso asezantsi.
CSP zithandwa kakhulu nefanelekileyo kolu shishino ukuba ukuya ngoku kukho kwama-50 iintlobo CSPs kusapho kunye nenani sisanda yonke imihla. A lot of iimpawu kunye neempawu CSP zezi contributive ndwa wayo kule nkalo:
• Ukunciphisa ubungakanani package
CSP Ungayifumana i ukusebenza sopakisho kutsho kuma-83% okanye ngaphezulu, enkulu ingxinano ayenyuka kweemveliso.
• Ulungelelwaniso Self
CSP uyakwazi ukuba self elungelelaniswe kwinkqubo PCB indibano reflow ukuze yenza SMT lula.
• Ukungabikho uhola bent
Ngaphandle inxaxheba iintambo kruthu, imiba coplanar bangawanciphisa kakhulu.
WLCSP, olufutshane ukuze package isikali kwinqanaba nesonkana esisicaba chip, oyintsobi wokwenene CSP ukususela package kwalo liveza ubukhulu chip-scale. WLCSP libhekisela IC ezingxobeni technology kwinqanaba nomqathane. Idivaysi WLCSP ngenene kufa apho uluhlu inezigingqi okanye iibhola solder yomveleli kwi I / O pitch, ukuhlangabezana neemfuno iinkqubo indibano webhodi yesiphaluka yemveli.
Izinto eziluncedo WLCSP ikakhulu ziquka:
• Inductance ukusuka basweleka ukuya PCB zincinci;
• Isayizi Package liyehla sisidanga mninzi eziphuculiweyo;
• ukusebenza Uhanjiso Thermal ukuba kakhulu ngcono.
Ukuza kuthi ga ngoku, ukulawula indlela WLCSP zombini ubuncinane ogama Kwisithuba-Die inowuthi Across-Die phula unako ukufikelela 0.35mm thina.
0201 no 01005
Njengoko kwimarike ngekhompyutha kunye neemveliso kwangaphambili, eya ikhula of miniaturization ye cell phones, laptops njl uhlala okuqhuba isicelo amacandelo kunye nobukhulu ezincinane. Ukuze kulungelelaniselwane lo mkhwa, sigqiba ukwenza iinzame zokwandisa icandelo ibandla ubunakho ukuya ku 0201 no 01005.
Ukuza kuthi ga ngoku, kokubini 0201 no 01005 athandwa kakhulu eyiyimarike yorhwebo nge ngenxa iingenelo zilandelayo:
• Isayizi Tiny eyenza kakhulu wamkelekile iimveliso ekupheleni isithuba-sisinyanzelo;
• ukusebenza Zintle xa ukwandiswa nokusebenza kweemveliso elektroniki;
• Ihambisana kunye neemfuno ezixineneyo iimveliso ze-elektroniki;
• izicelo kakhulu-high speed.
Ukuze kuphunyezwe ibandla ubunakho ka-01005, sibe nempumelelo xa kuqwalaselwa imiba malunga inkqubo nezixhobo zawo kuquka uyilo PCB, amacandelo, solder paste, khetha kunye nokubekwa, reflow, istensile kunye nokuhlola. Yethu 20 amava iminyaka 'kusisiza zishwankathela ukuba ngokwemigaqo post-reflow, xa kuthelekiswa namacandelo kunye nezinye iintlobo iiphakheji, amacandelo apakishwe kunye 01005 baqhube kakuhle umba yokuhluza ezifana ekuvaleni, ilitye, ngohlangothi-ukuma, ngamahla-phantsi, ingxenye njl
Thina bekwazi yokuphatha iintlobo ezahlukeneyo upakisho kwinkqubo indibano PCB kunye sicatshulwa singentla uyasilela ukubonisa zonke. Ukuba ifomu ingxenye iphakheji yakho ezifunekayo ngaphandle kwezi zichazwe ngasentla, kucelwa ungathandabuzi ukufikelela kuthi apha wonderful@wonderfulpcb.com ngenxa yethu eyandisiweyo package yokuphatha ubunakho.